हे प्रभु! यो कस्तो हरिबिजोग? छोराछोरी पाल्नु पर्ने उमेरमा श्रीमतिले स्याहार्दै – भिडियो – PathivaraOnline
Home > भिडियो > हे प्रभु! यो कस्तो हरिबिजोग? छोराछोरी पाल्नु पर्ने उमेरमा श्रीमतिले स्याहार्दै – भिडियो
हे प्रभु! यो कस्तो हरिबिजोग? छोराछोरी पाल्नु पर्ने उमेरमा श्रीमतिले स्याहार्दै – भिडियो
admin January 27, 2019 भिडियो, समाज 0
दुःख धनी गरिब सबैसँग हुन्छ । तर गरिबको दुःख चाँडै देखिन्छ भने धनीका दुःख देखिँदैनन् । धनीले त चाँडै दुःखलाई समाधान गर्न तर्फ लाग्छन् । गरिब दुःखीहरुले कुनै पनि हालतमा आफ्नो परिवारमा आइपरेको आँधिवेरीको सामना गर्न सक्दैनन् ।
त्यस्तै सुरेन्द्र कुमार बम्जनको सुन्दर जीवनलाई सोच्तै नसोचेको आँधिवेरीले साहारा खोज्ने बनाइदिएको छ । उनको कम्बर भन्दा तलको भाग चल्दैन् । उपचारको क्रममा उनले धेरै खर्च गरे तर उनको उपचार सफल भएन । अहिले उनी ह्यील्चिएरको साहारमा पुगेका छन् ।
उनलाई ह्यील्चियरमा श्रीमतीले राख्दिनु पर्दछ । उनलाई सहयोग गर्न चाहानुहुने सहयोगीहरुले प्रभु बैंकमा रहेको उनकै नामको खाता नम्बर १४४१०७०११८८६३३०००००१ मा सहयोग गर्ने सक्नुहुन्छ । उनलाई सम्पर्क गर्नका लागि सम्पर्क नं. ९८५११८९००६ वा ९८१८६६२४४० रहेको छ ।
रणभुमी बन्यो बानेश्वर, शान्तिपुर्ण बिरोध गर्दा टाउको फुटाइयो
भारतीय डान्स रियालिटी शो ‘डान्स प्लस फोर’ मा फर्स्ट रनर अपको टाइटल जितेर सुजन तामाङ नेपाल फर्किए , एयरपोर्टमै भब्य स्वागत जुलुस (भिडियो सहित)